Mogadishu Journal » 2021 » April » 2
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyaddaha Somalia ayaa shaacisay iney dib u bilaabeyso bixinta baasaboorka Soomaaliga ah oo dhowr bilood u xirnaa cudurka COVID-19. “Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyaddaha Somalia, waxay halkaan ugu soo gudbineysaa muwaadiniinta Soomaaliyeed, wargelin la...
Saudi FM says normalisation of relations with Israel would bring tremendous benefits, but the move depends on the progress of the peace process. 2 Apr 2021 A normalisation deal between Saudi Arabia and Israel would benefit the region, the kingdom’s foreign minister has said,...
Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida. Mustafa Muxumed Cagjar oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu soo hadal qaaday heshiis dhawaan ay la gaareen maamulada Galmudug iyo Hirshabelle ee Koonfurta Somalia. waxaa uu sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo ammaanka xadka...
Wasiirka Arrimaha Gudaha Jarmalka oo diiday inuu qaato talaalka AstraZeneca
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Jarmalka Seehofer ayaa diiday inuu qaato talaalka AtsraZeneca. Arrintaasi waxay ka timid ka dib markii uu Wasiirka Caafimaadka Jens Spahn ka codsaday Wasiirada kale ee Xukuumadda ku jira ee 60-ka sano ka weyn inay daawadaas isku talaalaan Wasiirka...